Beesha Caalamka ma awoodaa in ay bixiso dhaqaale ku filan AMISOM ? – XAMAR POST
Beesha Caalamka ma awoodaa in ay bixiso dhaqaale ku filan AMISOM ?
Sarkaal sare oo ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa ku baaqay in taageero weyn loo fidiyo Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), wuxuuna ka digay in maalgelin la’aanta ah ay halis galin karto horumarka laga gaaray dalka.
Wuxuu sheegay Beesha Caalamka in aysan awoodin in ay bixiso maaliyad ku filan Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, sidaasi awgeedna loo baahan yahay taageero weyn.
“Waxaan sii wadi doonnaa in aan maqalno rafcaannada ka soo horjeeda Midowga Afrika ee Nabadda iyo Guddiga Midowga Afrika, maalgalin ku filan AMISOM ayaa loo baahan yahay in si deg deg ah loo helo,” ayuu yiri Haile Menkerios.
Sarkaalkan ayaa sidoo kale xusay in ay sii wadayaan ballanqaadka Golaha Ammaanka iyo Nabadda ee Midowga Afrika si ay u tixgeliyaan culeyska maaliyadeed ee ka dhaxeeya howlaha taageerada Nabadda ee ay ansixiyeen Golaha Amaanka.
Mr. Menkerios, oo ah Madaxa xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan Midowga Afrika (UNAOU), ayaa muujiyay sida joogtada ah ee joogtaynta heerarka kala duwan ee u dhexeeya Xoghaynta Qaramada Midoobay iyo Guddiga Midowga Afrika iyo in ergooyinka QM ay la shaqeeyaan oo ay buuxiyaan dadaallada AU-da gaarka ah ee loo yaqaano “Special Envoys” oo ku saabsan xaalado adag oo ka jira qaaradda.
Ugu dambeyntii Menkerios ayaa ka hadlay iskaashiga iskaashi ee u dhexeeya Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika, iyo aqoonsiga Golaha Ammaanka ee ah in wadahadallada iyo go’aamada ku saabsan arrimaha nabadda iyo amniga ee Afrika ay ku kordhin karaan xog-ogaalayaasha madaxda sare ee AU, oo ay wehliyaan shaqaalahooda UN-ka.
Wariye ku dhaawacmay qaraxii Beledweyne oo geeryooday
Xildhibaanada Baarlamaanka oo maanta kulan yeelanaya